Ulujonga njani uluhlu lweenkcukacha zakho zasekhaya | Martech Zone
NgoLwesihlanu, Oktobha 23, 2020 Lwesine, Okthobha 22, 2020 Douglas Karr
Imikhombandlela yasekhaya inokuba yintsikelelo kunye nesiqalekiso kumashishini. Zintathu izizathu eziphambili zokunikela ingqalelo kwizalathiso zasekhaya:
Ukubonakala kwemephu ye-SERP -Iinkampani azihlali ziqonda ukuba ukuba neshishini kunye newebhusayithi ayikwenzi ukuba ubonakale kwiphepha lesiphumo seinjini yokukhangela. Ishishini lakho kufuneka lidweliswe kwi Ishishini likaGoogle ukufumana ukubonakala kwicandelo lemephu kwiphepha lesiphumo seinjini yokukhangela (SERP).
Izikhundla zeOrganic -Iirejista ezininzi zilungile ukuba zidweliswe kulwakhiwo lweendawo zakho eziphilayo kunye nokubonakala (ngaphandle kwemephu).
Ukuhanjiswa kwesalathiso - abathengi kunye namashishini basebenzisa imikhombandlela ukufumana indawo zentengiso, iivenkile zokutyela, ababoneleli beenkonzo, njl njl. Ukuze ufumane ishishini ngokudweliswa.
Izalathisi Zasekhaya Azihlali Zilungile
Ngelixa kukho izibonelelo kwiikhombisi zasekhaya, ayisoloko isicwangciso esihle. Nazi ezinye iingxaki kwimikhombandlela yasekhaya:
Intengiso enobundlobongela - Iirejista zasekhaya zihlala zenza imali yazo ngokukuthengisa kuluhlu lweepremiyamu, iintengiso, iinkonzo kunye nokwenyusa. Rhoqo kunoko, ezi khontrakthi zihlala ixesha elide kwaye azinantsingiselo yokusebenza inxulumene nayo. Ke, ngelixa kuvakala ngathi licebo elihle ukudweliswa ngaphezulu koontanga bakho… ukuba akukho mntu undwendwela isikhombisi sabo, ayizukunceda ishishini lakho.
Izalathiso Khuphisana NAWE Imikhombandlela yasekhaya ineebhajethi ezinkulu kwaye eneneni ikhuphisana nawe ngokwasemzimbeni. Umzekelo, ukuba uphahla lwasekhaya, umkhombandlela kuluhlu lwasekhaya lwophahla uza kusebenza nzima ukukala ngaphezulu kwewebhusayithi yakho. Ungayichazanga eyokuba baya kuzisa lonke ukhuphiswano lwakho ecaleni kwakho.
Ezinye izalathiso ziya KUKUKHATHAZA - Ezinye izikhombisi zigcwele zizigidi zokungeniswa kogaxekile, i-malware kunye neewebhusayithi ezingalunganga. Ukuba idomeyini yakho inxibelelene nalawo maphepha, inokwenzakalisa izikhundla zakho ngokunxulumana nezo sayithi.
Iinkonzo Zolawulo Lwasekhaya
Njengazo zonke iingxaki zentengiso phaya, kukho iqonga lokunceda abanini bamashishini okanye iiarhente zentengiso ukulawula uluhlu lwabo. Ngokwam, ndincoma ukuba iinkampani zilawule iakhawunti yabo yoShishino lukaGoogle ngokuthe ngqo ngokusebenzisa iapp kaGoogle ngeshishini- yindlela entle yokwabelana kunye nokuhlaziya izibonelelo zakho zasekhaya, wabelane ngeefoto, kwaye uhlale unxibelelana nabakhenkethi kwi-SERP.
I-Semrush liqonga lam endilithandayo lokuphanda kunye nokujonga ukubonwa kweinjini yokukhangela kwabaxhasi bam. Ngoku bandise iminikelo yabo kuluhlu lwasekhaya ngokutsha uluhlu lolawulo lwesixhobo!
Jonga ukubonakala koluhlu lwasekhaya
Into yokuqala onokuyenza kukujonga uluhlu lwakho. Faka ilizwe, igama leshishini, idilesi yesitalato, ikhowudi ye-zip, kunye nenombolo yefowuni yeshishini lakho:
I-Semrush ngokuzenzekelayo ikunika uluhlu lweerejista ezigunyazisiweyo kunye nendlela oludweliswa ngayo uluhlu lwakho. Iziphumo zichitha iziphumo nge:
isipho -Ukho kwisikhombisi sodweliso lwasekhaya kwaye idilesi kunye nenombolo yefowuni zichanekile
Ngemiba -Ukho kuluhlu lodweliso lwasekhaya kodwa kukho umba kwidilesi okanye inombolo yefowuni.
Hayi ngoku -Awukho kolu luhlu lweendawo ezinegunya.
Ayikho - isikhombisi ekuthethwa ngaso asikwazanga ukufikelela.
Ukuba ucofa Ukuhambisa ulwazi, ungahlawula umrhumo wenyanga, kwaye Semrush uya kuthi emva koko ubhalise ungeniso loluhlu olungabonakali kulo, uhlaziye amangeniso awenzayo apho kungangenanga khona, kwaye uqhubeke nokugcina imikhombandlela ihlaziywa inyanga nenyanga.
Iimpawu ezongezelelweyo ze Semrush Uluhlu lwasekhaya
Imephu kaGoogle yeMephu yokufudumeza umzimba -Bona ngokuchanekileyo ukuba uvela njani kwiziphumo zeMephu zikaGoogle kwiindawo ezingqonge ishishini lakho ngokuthe ngqo. Ixesha elingaphezulu, unokujonga ukuba uphucule kangakanani.
UkuSebenza ngokuKhangela kweLizwi -Abantu bakhangela ngelizwi labo ngoku kunakuqala. Semrush iqinisekisa ukuba udweliso lwakho lwenzelwe imibuzo yezwi.
Landelela kwaye uphendule ukuPhononongwa -Bona lonke uphononongo lweshishini lakho kwaye uthathe amanyathelo afike ngexesha ukugcina igama lakho ngokuphendula kuFacebook nakuShishino lukaGoogle.
Lawula iingcebiso zomsebenzisi -Bona utshintsho kuluhlu lwakho olucetyiswe ngabasebenzisi kwaye uluvume okanye ulugatye.
Fumana kwaye ususe amashishini enkohliso -Kunokubakho abakhohlisi abanegama elifanayo leshishini njengawe web. Lungisa nayiphi na imiba enxulumene nayo!
Jonga uluhlu lwakho lwasekhaya
Ukubhengezwa: Siyinxalenye ye Uluhlu lweSemrush yaseKhaya
tags: Imikhombandlela yeshishinijonga umkhombandlela wasekhayajonga uluhlu lwasekhayaImikhombandlela yasekhayaukukhangela kwendawouphendlo lwasekhayayendawo seo